Tsy halefa televiziona ny revolisiona
2012-11-23 @ 22:58 in Politika
Variana ny tena nijery ity ranamana iray ity. Nitety lahatsary maromaro aho ka nahita ny ompa nataony tamin'ny filohan'ny Firenena heverina ho matanjaka indrindra eto an-tany. Manana fahasahiana izy nefa mahafantatra tsara ny heriny sy ny harena ao amin'ny fireneny izay ahasahiany mijoro. Niely vetivety tamin'ny namana Malagasy tao amin'ny facebook ity lahatsary iray ity.
Tsorina fa lesona lehibe no azo notsoahina tao ary mino tanteraka aho fa efa nakan'izay nametraka ny teti-panorona ny fanonganam-panjakana teto tamin'ny 2009 izy ity ka nidifian-dry zareo avokoa izay fomba rehetra mety hahatafaverina izay naongana teo amin'ny fitondrana. Ohatra: voafehy tanteraka tamin'ny alalan'ny fanoloana ny komandy voalohany sy ny fanoloana ny minisitry ny fiarovana ny tafika teto Madagasikara, ary nobaikoany ny miaramila sy ny mpitandro ny filaminana rehetra niambina ny filoha hiverina an-dakazerina. Raha jerena ihany koa ity lahatsary ity dia tsy hisy na inona na inona vanona raha tsy misy fandraisana anjaran'ny tafika ihany koa.
Ohatra faharoa azo notarafina dia ny fifehezana manontolo ny haino aman-jery. Niara-niasa avokoa ny haino aman-jery tsy miankina hanatontosana ilay fanonganam-panjakana ary natao izay ifehezana izay haino aman-jery tsy anatin'ny tetika tsy hiteny... izany hoe nampanginina tanteraka (canal 8 ilay izy raha manaraka ilay lahatsary ianao, ary raha tsy diso ihany koa aho). Ankehitriny moa saiky voafehy avokoa ny haino aman-jery rehetra eto Madagasikara fa ny gazety ihany no misy vitsivitsy heverina ho mpanohitra, mba hametrahana ilay sarina demokrasia angamba nefa ahoana moa no ilazana demokrasia raha tsy misy akory ny nifidianana eo amin'ny sehatra nasionaly manontolo ireo manandra-tena hitondra? Nanaitra ahy ny nanodinana ilay hetsiky ny mpanohitra hiodina hankany amin'ny Lapam-panjakana misy ny fiasan'ny Filoha... fa efa niandry teny ihany koa ireo mpanohana ny filoha... ary nisy ny tifitra nataon'ny "sniper".
Fa ny tena nampitolagaga ahy dia ny nahasahian'ny mpanohana ilay filoha naongana fa tsy nanaiky ny hametra-pialana nandeha ihany koa teny amin'ny Lapam-panjakana satria fantatry ry zareo anaty any angamba fa tsy hitifitra azy ireo velively ny mpiambina ny filoha rehefa tsy mihoatra ny tsipîka tsy azo ihoarana ry zareo. Fa iverenako ilay fandehanana nankeny an-dapa nisiana "sniper" nitifitra olona: tsikaritro fa teny amin'ny lohany no voatifitra ny azo sary tamin'ireo voatifitra, ka mba te-hanontany tena aho hoe ary faritra taiza tamin'ny tenany ireo voatifitra tamin'ny 7 febroary 2009 moa no voa ka maty? Fanontaniana tsotra ihany ny ahy.
Nahavariana ny hasiakan'ny polisy na miaramila tamin'ny mpanohana ny filoha naongana raha arahinao ny sary fa tsy nampiala ireo mpanohana izany satria nisy hatrany ny fantsona nahafahana nampita vaovao, dia ny haino aman-jery iraisampirenena, nefa raha narahintsika ny zavamisy teto an-toerana nanana ny lanjany koa ireo mpanao gazety iraisampirenena ary niasa mafy tokoa ny sasany hanaratsiana olona sy hanatsaratsarana izay tohanany na iraka nampanaovina azy hotohanany. Be ny eritreritra nandalo tao an-tsaina ka izay no amoahana ity lahatsary somary maharitra adiny iray mahery ity hotsakotsakoanao ihany koa. Farany, lasa fijeriko mihitsy ny vaovao any Amerika Atsimo an! efa nisy ny fotoana nilazako ny tany Honduras izao indray izay nisy tany Venezoelà efa nihoatra ny folo taona mahery izay!!! Ary rehefa misy tombontsoan'ny firenen-dehibe voakitikitika ve vao tena azo antoka ny isian'ny fanonganam-panjakana?
Fa hivadika zavamisy eto Madagasikara kely aho. Somary nahavariana ahy ny fihetsiketsehana nataon'ilay olona iray izay nandritra ny tontolo andron'ny 22 novambra 2012. Indro izy nivezika etsy, nivezika eroa milaza ny hanombohan'ny tetika fanamboarana lalankely sy fotodrafitrasa tahana ny paompy sy fanasan-damba. Somary tadidiko ihany fa efa nisy ny fifanarahana teo amin'ny mpitantana an'Antananarivo sy ny AFD (Frantsay) amin'ny hanamboarana ny lalankely mihoatra ny 100 km izy izay... vao ny 30m no vita tamin'ny herintaona na roa taona izay dia tsy re intsony izay tohiny. Ity angamba ilay izy fa nipoitra rehefa hokarakaraina amin'izay ny fifidianana, araka ny tombatombana, fa dia natao tahaka ireny hoe avy amina minisitera ireny ilay vola. Miresaka 22 novambra ihany dia misy zavatra eritreretina. Ao an'eritreritrao ve hoe inona amin'ny tantaran'i Madagasikara izany? Holazaiko ihany : io no andro nahaterahan'ny Mpanjakavavin'Imerina farany izay nofaritan'ny boky tantara ho mpanjakavavin'i Madagasikara farany nialoha ny fanjanahantany. Mbola ampiana ve izay mahatalanjona amin'ilay daty? jereo anie ny 22/11/2012 fa tarehimarika 0, 1, 2 ihany no miasa... fa misy resaka filalaovan'isa soa aman-tsara indray izany an! te-halaza amina andro iray nanana ny tantarany teto Madagasikara. Takatrao ve izay tiako ampitaina? Rehefa tsy azonao avelao amin'izao fa tsy maninona ka!